Xidigii United Morgan Schneiderlin oo ku biiray Everton
Home Sports Xidigii United Morgan Schneiderlin oo ku biiray Everton
Everton ayaa si rasmi ah Man United kala heshiisay aduun gaaraya 22 milyan oo ay kula wareegayso xiddiga khadka dhexe ka safta ee Morgan Schneiderlin.
Everton ayaa mudo badan si dhow loola xiriirinayey inay u dhaqaaqdo kubad joojiyaha reer France oo Walaalo run ah ay noqdeen kursiga kaydka United, isbuucii h-e ayeey ahayd markii laga soo diiday 19 milyan oo ay xiddigaan kula saxiixan kareen.
Haatan The Tellegaraph aya alaga soo xigtay inay heshiis rasmi ah kooxda Everton la gaartay kooxda Manchester United, 22 milyan oo ginni ayeey labada gacmood isku gashteen iyadoona heshiiska si rasmi ah loo dhamaystiri doono 48-da saac ee soo socota.
28 sano jirkaan ayaa xataa hal kulan u safan United xilli ciyaareedkaan iyo weliba inta uu jose Mourinho laylinta United qabtay Premier League, waxana uu mari doona caafimaadka ka hor inta uusan lugu dhawaaqin heshiiskiisa Everton.
Ronald Koeman ayaa la fahansan yahay inuu xiddigaan si aad ah u taageero oo ay horay uga soo wada shaqeeyeen Southampton, waxaana lugu wadaa in dalabkiisa xiga ka gudbisto xiddiga Memphis Depay oo ah xubin kale oo qaati ka taagan kursiga kaydka ee Maslaxa Riyada.
Somalia: Guddoomiyaha X/S/K/Cagta oo u socdaalay xarunta FIFA
Mohamed - April 18, 2018
Shir jaraa’id oo maanta Muqdisho ay ku qabteen Hay’adda Culimadda Soomaaliywed,...
Sheikh Shariif oo Tilmaamay cidda laga doonayo dhameynta Khilaafka Imaaraatka &...
Muxuu Madaxweyne Farmaajo ka doonayaa dalka Sacuudiga [Akhriso]
Somalia: Ethiopia docked points for fielding ineligible players: Somalia 3 Ethiopia...